छ महिना बन्द भएर खुलेका एयरलाइन्स एकाएक किन भए उत्साहित ? हेर्नुस – Rapti Khabar
छ महिना बन्द भएर खुलेका एयरलाइन्स एकाएक किन भए उत्साहित ? हेर्नुस
काठमाडौं,असोज १३, कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि छ महिना बन्द भएर खुलेको आन्तरिक हवाइ उडानमा एयरलाइन्स उत्साहित भएका छन्।
उडान खुलेपछि मागका कारण कम्पनीहरु उत्साहित भएका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरुमा २५ प्रतिशत क्षमतामा उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो।
महामारी अघि गरिरहेको उडान संख्याको २५ प्रतिशतबाट उडान सुरु गरेका एयरलाइन्सले ९० प्रतिशतसम्म अकुपेन्सी (कूल सिट क्षमतामध्ये उपलब्ध यात्रु) प्राप्त गरिरहेका छन्।
नेपालको आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा धेरै उडान गर्ने बुद्ध एयरले यो बीचमा ९० प्रतिशत अकुपेन्सी पाइरहेको छ। एयरलाइन्सका प्रबन्धक रुपेश जोशीका अनुसार यात्रुको आत्मविश्वास बढ्दै जाँदा यात्रुहरु प्रत्येक दिन बढिरहेका छन्।
‘कतिपय गन्तव्यमा अहिले टिकट नपाएर यात्रुहरुले फोन गर्न थालिसके। माग धेरै सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने। खुला गरिएको उडानमा पर्याप्त यात्रु पाएपनि भाडा भने पहिलेजस्तो माग तथा आपूर्तिको आधारमा निर्धारण नगरिएको उनको दाबी छ।
महामारीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका एयरलाइन्सले उडान खोल्नेवित्तिकै यात्रुको सकारात्मक साथ पाएकाले अहिले न्यूनतम भाडामै उडान गरिरहेको उनको भनाइ छ।
हवाइ यातायात र सडक यातायात सँगसँगै खुलेको थियो। तर सडक यातायातमा भाडा बढेको छ। जहाजको न्यूनतम भाडा र गाडीको भाडामा धेरै अन्तर नभएपछि जहाजको यात्रा धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ।
भाडा सस्तो र छिटो गन्तव्यमा पुगिने भएकै कारण यात्रुहरुले महामारीपछि जहाजको यात्रा गर्न सहज मानिरहेको यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले बताए।
यतीले अहिले गरिरहेको उडानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी रहेको छ। नेपालको आन्तरिक उडानमा यती र बुद्धकोमात्र ७० प्रतिशत बढी बजार हिस्सा रहेको छ।
यात्रु बढेपछि उडान बढाउँदै
२५ प्रतिशत उडानमा अकुपेन्सी ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भएपछि एयरलाइन्सहरुले उडान संख्या थप गर्दै गइरहेका छन्। अब थपिने उडानबाट सामन्य अवस्थाकै तुलनामा यात्रु पुग्ने उनीहरुको अनुमान छ। यद्यपी आम्दानीका हिसाबले भने पहिलेजस्तो नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
बुद्ध एयरले काठमाडौंबाट दैनिक २१ उडान गरिरहेको थियो। यसमा ८ उडान थप्ने तयारी उसले गरेको छ। लकडाउन अघिको अवस्थामा बुद्धले दैनिक ५० उडान गर्दै आइरहेको थियो। जसमा दिनमा १० जति माउन्टेन फ्लाइट हुन्थे।
अहिलेको समयमा पोखरा बाहेक देशका अन्य गन्तव्यमा उडानको माग बढ्दै गएको बुद्धका प्रबन्धक जोशीको भनाइ छ।
विदेशी पर्यटक नआएका कारण दिनमा आधा दर्जन उडान हुने पोखरामा अहिले १ उडानमै सिमित भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै यती एयरलाइन्सले पनि उडान थप गर्ने भएको छ। यतीले १० बाट दैनिक २१ उडानका लागि प्राधिकरणमा अनुमति माग गरेको थियो। प्राधिकरणले भने यतीलाई १९ उडानकोमात्र अनुमति दिने भएको छ।
यतीले यसअघि सामन्य अवस्थामा दैनिक ४० उडान गर्दै आएको थियो। गएको सात महिनादेखि शून्य व्यापार शून्य भएका एयरलाइन्सलाई अहिलेको उडानबाट आर्थिक राहत मिलेको छ।
स्थायी बाहेक अरु कर्मचारी बिदा गरेर आधारभूत तलबमात्र दिइरहेका एयरलाइन्सले आम्दानी हुन थालेपछि सामन्य तलब दिने तयारी गरिरहेका छन्। रवीन्द्र शाही/सेतोपाटीबाट
यति एयरलाइन्सको प्याकेजमा धेरैको चासो किन बढ्यो, कहाँको लागि कस्तो प्याकेज ? हेर्नुस
Posted on September 25, 2020 Author Rapti Khabar
काठमाडौं, असोज ९ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यति एयरलाइन्सले ल्याएको प्याकेज सर्वसाधारणको चासो बढेको छ। यतिले कोभिड १९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरेको छ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले एभरेष्ट ट्रेल र मुक्तिनाथ जान धेरैको चासो रहेको बताएका छन्। यतिले एभरेष्ट ट्रेलमा ५ दिनको १४ हजारमै घुम्नसक्ने व्यवस्थासहितको प्याकेज ल्याएको […]
यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान, कहाँ कहाँ होला बर्षा ? हेर्नुस